OPPO F3 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်မေလ ၄ ရက်တွင်စတင်မည် Androidsis
OPPO F3 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်မေလ ၄ ရက်နေ့မတိုင်မီထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်
OPPO သည် F3 နှင့် F3 Plus စမတ်ဖုန်းများကိုအတူတကွထုတ်လုပ်မည်ဟုအစကထင်ခဲ့သော်လည်းကုမ္ပဏီကပြီးခဲ့သည့်လက OPPO F3 Plus ကိုသာတရားဝင်မိတ်ဆက်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
သို့သော် OPPO F3 သည်အိန္ဒိယ၌မေလ ၄ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ပွဲထွက်လိမ့်မည်ဟုတရုတ်ကုမ္ပဏီကမကြာသေးမီကအတည်ပြုခဲ့သည်။ ယခုအခါမိုဘိုင်းဗွီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းအပြင် ထပ်မံ၍ သတ်မှတ်ထားသောစံသတ်မှတ်ချက်များမှတဆင့် terminal ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိခဲ့သည်။
1 Oppo F3 နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ
2 Oppo F3 ဗီဒီယို
3 GFXBench နှင့် Geekbench ရှိ Oppo F3 စံနှုန်းများ
Oppo F3 နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ
စတင်သူများအတွက် OPPO F3 အသစ်တွင် ၅.၅ လက်မ Full HD မျက်နှာပြင်ပါရှိပြီး Corning Gorilla Glass 5.5 ကာကွယ်မှုနှင့်အတူ Snapdragon5ပရိုဆက်ဆာကိုယူဆောင်လာလိမ့်မည်ဟုယခင်ကယုံကြည်ခဲ့သော်လည်း GFXBench နှင့် Geekbench မှစာရင်းအသစ်များကအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြသည် the SoC ။ ရှစ် core ကို MediaTek MT6750T 1.5GHz တစ်မြန်နှုန်းမှာ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, MediaTek ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူလိုက်ပါလိမ့်မည် RAM 4GBသိုလှောင်ရန်အတွက် 64GB နေရာ၊ တိုးချဲ့နိုင်သည် သော microSD နှင့် operating system ကို အန်းဒရွိုက် 6.0 Marshmallow အရောင် OS 3.0 ကိုစိတ်ကြိုက်အလွှာနှင့်အတူ။
နောက်ဆုံးတွင် Oppo F3 Plus ကဲ့သို့ Oppo F3 သည်ယူလာပါလိမ့်မည် 16 + 8 Megapixel Dual Camera တပ်ဆင်ထားသည်နောက်ဘက်၌ရှိလိမ့်မည်နေစဉ် 13 megapixel အာရုံခံကိရိယာ.
Oppo F3 ၏အရွယ်အစားမှာ ၁၅၃.၃ x ၇၅.၂ x ၇.၃ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ အလေးချိန်မှာ ၁၅၃ ဂရမ်ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီစွမ်းရည်မှာ 3.200mAh.
Oppo F3 ဗီဒီယို
၁၀ စက္ကန့်ခန့်ကြာသော Oppo F10 ၏ဗီဒီယိုသည် YouTube channel တွင်မကြာသေးမီကပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် SlashLeaks, သင်သည်အောက်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
GFXBench နှင့် Geekbench ရှိ Oppo F3 စံနှုန်းများ
Oppo CPH1609 မော်ဒယ်ပါသည့် Oppo ဖုန်းသည်မကြာသေးမီက GFXBench တွင်ပေါ်လာပြီး MediaTek MT6750T ပရိုဆက်ဆာ၏တည်ရှိမှုကိုဖော်ပြပြီး၎င်းသည် F3 ကိုရည်ညွှန်းကြောင်းအတည်ပြုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဤစာရင်းကစမတ်ဖုန်းသည် NFC ဆက်သွယ်မှုမရှိပဲရောက်လာနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။
En GeekBenchOppo F3 သည် single-core စမ်းသပ်မှုတွင် ၇၆၃ မှတ်ရရှိခဲ့ပြီး multi-core တွင် ၂၇၉၃ မှတ်မှတ်မှတ်ရရှိခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » OPPO F3 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်မေလ ၄ ရက်နေ့မတိုင်မီထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်